လူမှုရေးသိပ္ပံသုတေသနယောဘကိုဖျေါပွခကျြနမူနာ – JobDescriptionSample.org
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 18, 2016 လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက် 1 မှတ်ချက် 1,217 views
Use biochemistry, microbiology, ပုံစံ, and also other sciences to examine the concepts underlying the control and damage of foods; examine food content to ascertain quantities of vitamins, fat, sugars, and proteins; find new food solutions; study ways to create processed foods secure, worthwhile, and beneficial; and use food research expertise to ascertain greatest ways to method, အထုပ်, စောင့်ရှောက်, လက်လီ, and deliver meals.
Check new services for shade, မျက်နှာပြင်, flavor , healthy content, and adherence to government and market specifications.
Examine raw ingredients regarding balance or maturation regarding handling and concluded products for vitamins and minerals, and safety, အလွန်ကောင်းမွန်သော.
Research techniques to strengthen facets of food, such as for example substance structure, flavoring, colour, ကိုက်ညီမှု, value that is nutritional, သက်သာခြင်း.
Create enhanced or fresh means of providing food, ကိုင်တွယ်ခြင်း, အသွင်အပြင်, စောင့်ရှောက်, and protecting, employing familiarity with chemistry along with sciences that are other.
Check food-processing regions to ensure complying with authorities polices and standards regarding cleanliness, ကာကွယ်မှု, အရည်အသွေး, and waste management expectations.
Active ကိုနားထောင်ခြင်း-ရန်အခြားအရှေးရှေးအပြည့်အဝအာရုံစိုက်မှုရာပူဇော်သက္ကာကိုအခိုင်အမာအဘယျသို့, getting time to comprehend the things being created, သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးမြန်းကိစ္စများ, rather than interrupting at situations that are improper.
Critical Thinking-Using logic and thought to spot the benefits and disadvantages of choice alternatives, ကိစ္စများမှတွေ့ရှိချက်သို့မဟုတ်နည်းလမ်းများ.
Tracking-TrackingPEREvaluating functionality of yourself, အခြားအဖြစ်ကြောင်းကိုတစ်ဦးချင်းစီ, or companies consider remedial action or to produce improvements.
စစ်ဆင်ရေးစောင့်ကြည့်-မြင်လျှင်နောက်ထပ်ညွှန်းကိန်း, နာရီမျက်နှာပြင်, or tests to ensure there isadevice performing correctly.
Quality-Control Analysis-Conducting investigations and tests of goods, ပံ့ပိုးပေး, သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်.
Systems Analysis-Identifying howamethod should work and just how changes in circumstances, လုပ်ငန်းဆောင်တာ, နှင့် setting ကိုသက်ရောက်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ.
Supervision of Money-Determining how income is likely to be invested to acquire the job performed, ဤအဥပဒေကြမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်းနှင့်စာရင်းအင်း.
Administration of Materials Methods-Viewing and finding to the proper utilization of establishments, ဂီယာ, နှင့်ထုတ်ကုန်အချို့ function ကိုလုပ်ဖို့အလေးအနက်ထားလိုအပ်.
ဝန်ထမ်းများလှုံ့ဆော်အရင်းအမြစ်များ-Creating ၏စီမံခန့်ခွဲမှု, and leading persons as they they work, ကြောင်းအလုပ်တစ်ခုကိုများအတွက်အလွန်အကောင်းဆုံးရှေးရှေးအဆုံးအဖြတ်.
Pingback: Legal Secretary Jobs – How For Getting A Job As The Legal Secretary – veg-နက်နဲသောအရာ